Vaovao - Ahoana ny fiantraikan'ny karazana drôna GSD sy ny fiaramanidina ny fahamarinan'ny maodely 3D
Ny fiantraikan'ny karazana drôna GSD sy ny fiaramanidina ny fahamarinan'ny maodely 3D
Ao amin'ny lahatsoratra farany Ahoana ny fiantraikan'ny teboka fanaraha-maso ny tany sy ny angon-drakitra PPK amin'ny maha-marina ny maodely 3D, dia nilaza izahay fa ankoatry ny GCP sy datas PPK, ny GSD sy ny drone mpitatitra dia manana fiantraikany marim-pototra ihany koa amin'ny fahamendrehan'ny 3D. modely.Koa manao fitsapana hafa izahay hanamarinana izany.
Fanandramana 1: ny vokatry ny GSD amin'ny fahamendrehana maodely 3D;
Valin'ny valiny 1:
halavan'ny fandrefesana （L0）
Halavan'ny modely 3D （L1） GSD = 2cm
Halavan'ny modely 3D （L2） GSD = 1.5cm
Valin'ny valiny 2:
Valin'ny valiny 3:
Valin'ny valiny 4:
Ny fiovaovan'ny andrana 1 dia:
1: Miaraka / tsy misy angona PPK.
2: Miaraka / tsy misy GCP.
3: GSD hafa: 1.5 cm na 2cm
Aorian'ny famakafakana ireo antontan-kevitra efatra momba ny andrana dia azontsika atao izao:
Rehefa DG4Pros ny fakantsary madiodio:
(1) Miaraka / Tsy misy teboka fanaraha-maso (GCP) sy data PPK tafiditra ao amin'ny triangulation AT, na VTOL na drone multi-rotor, na ny GSD dia 2cm na 1.5cm, ny maodely 3D namboarin'ilay fakantsary DG4Pros. afaka mahafeno ny fepetra takian'ny lesoka marina Ds≤10cm (Raha tena ≤5cm).
(2) Rehefa ny GSD no miovaova tokana, ny marimarina kokoa amin'ny maodely 3D miaraka amin'ny GSD = 1.5cm dia tsara kokoa noho io GSD = 2cm io.
Fanandramana 2: ny vokatry ny karazana drone mpitatitra amin'ny fahamarinan'ny maodely 3D
Halavan'ny modely 3D （L1） CW10
Halavan'ny modely 3D （L2） M600Pro
Ny fiovaovan'ny andrana 2 dia:
1: Miaraka / tsy misy GCP.
2: drone Carrier hafa: drone VTOL na drone multi-rotor
Aorian'ny famakafakana ireo andiana data roa fanandramana dia azontsika atao izao:
(1) Miaraka / Tsy misy teboka fanaraha-maso (GCP) na VTOL na drone multi-rotor, ny maodely 3D namboarin'ilay fakantsary DG4Pros fakana sary mihetsika dia afaka mahafeno ny fepetra takiana Ds≤10cm (Marina (5cm).
(2) Raha ny karazana drone carrier dia ny miovaova tokana, ny fahamendrehana maodely 3D amin'ny multi-rotor dia tsara kokoa noho izany amin'ny VTOL, fa ny fahasamihafana dia tsy dia lehibe.
Previous:Ny fiantraikan'ny halavan'ny fifantohana amin'ny valin'ny modeling 3D